Ciidamada ammaanka Koonfur Galbeed oo dilay sarkaal caan ah oo ka tirsan Al-Shabaab | Xaysimo
Home War Ciidamada ammaanka Koonfur Galbeed oo dilay sarkaal caan ah oo ka tirsan...
Ciidamada ammaanka Koonfur Galbeed oo dilay sarkaal caan ah oo ka tirsan Al-Shabaab
Ciidamada ammaanka Koonfur Galbeed ayaa sheegtay iney dileen xubin sare oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab kadib hawlgallo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Baay.
Ciidamada waxey baaritaan ka dhan ah Al-Shabaab ka sameeyeen degmoohyinka Bardaale iyo Awdiinle, waxeyna hawlgalkaas ku toogteen sarkaal caan ka ahaa deegaanadaas.
Sarkaalka la toogtay waxaa magaciisa lagu sheegay Ibraahim Macalin Cabdi (Ibraahim Ganeey), sidoo kale xubno u hadlay ciidamada ammaanka waxey sheegeen iney gacanta ku dhigeen hub iyo agab kale oo ay isticmaalayeen dagaalyahanada.
Dagaalyahanada Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida wali kama hadlin sheegashada ciidanka ammaanka Koonfur Galbeed, waxaana jiray hawlgallo ay ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ay mudooyinkii dambe ka sameynayeen deegaanadaas.
Hawlgallada ka dhan ah Al-Shabaab ayaa si aan kala joogsi laheyn uga socda Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxaana si wadajir ah u baacsanaya ciidamada Dowladda Soomaaliya, kuwa maamullada, askarta Amisom iyo taliska guud ee ciidamada mareykanka qaaradda Afrika.